I-LGLPAK LTD ihlela imisebenzi yethimba!
Kusukela ngo-Okthoba 16 kuya ku-17, 2021, inkampani yahlela iqembu lezinsuku ezimbili ukuphuma eTai'an Sun Tribe nase-Underground Dragon Palace. Ngalesi sikhathi bonke ozakwabo nemindeni yabo babambe iqhaza ngentshiseko, futhi wonke umuntu wayenemimoya ephezulu.
Ngemuva komcimbi, siqoqe imizwa neziphakamiso zawo wonke umuntu: kumnandi ukudlala, umuzwa jikelele muhle kakhulu, futhi uphumule kakhulu. Ukuhlala nokulala kuhle kakhulu. Ukujoyina umcimbi we-PK kubuye kufake nomoya wokulwa kwamaqembu, okuthuthuka ngenkathi uzijabulisa. Ukuqondana okucacile, ukuxhumana nokubambisana phakathi komunye nomunye.
Abaholi benkampani babuye baqinisekisa ukuhlelwa komcimbi futhi bakhuthaza iminyango efanelekile ukuthi yenze imizamo ephikelelayo futhi baqhubeke nokwenza imisebenzi enenzuzo ekuphumuleni ngokomzimba nangokwengqondo kwabasebenzi futhi enenzuzo ekuxhumaneni nasekubambisaneni kweqembu. Inhloso "yokubambisana" isetshenzisiwe.
I-LGLPAK LTD iyiqembu eliqeqeshiwe: abasebenzi bethu bokuthengisa banolwazi lweminyaka engaphezu kweshumi ku-clinker emaphaketheni aguquguqukayo
I-LGLPAK LTD iyiqembu elinamandla: siyawuthanda umsebenzi nempilo, igcwele amandla namandla amasha.
I-LGLPAK LTD iyiqembu elizinikele: sikholelwa ngokuqinile ukuthi ukwethenjwa kwamakhasimende kubangelwa imikhiqizo esezingeni eliphakeme kanye nezinsizakalo ezisezingeni eliphakeme zokuphakelwa. Ngokugxila kuphela lapho singenza umsebenzi omuhle ekuhwebeni kwangaphandle.
I-LGLPAK LTD iyiqembu elinamaphupho: sivela kuzo zonke izingxenye zomhlaba, kepha singasebenza ngokubambisana ngoba sihambisana nefilosofi efanayo: imikhiqizo emincane, izinto ezinkulu!